Momba anay - Xinneng Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Ny orinasa dia mpanamboatra matihanina kely sy salantsalany amin'ny panneaux photovoltaic solar. Efa hatry ny ela ny orinasa mpanondrana any ivelany no manondrana orinasa. Ankehitriny dia manapa-kevitra ny orinasa fa hanao orinasa tsy miankina amin'ny varotra ivelany. Hitan'ny tompon-trano ny fisokafana eny an-tsena ho an'ny fitaovana mihinana angovo avo lenta mba hampifangaroina amin'ny masoandro hampihena be ny vidim-piainana ho an'ny mpanjifa ary koa handray anjara mavitrika amin'ny fampihenana ny fiakaran'ny hafanana manerantany.
Nanatevin-daharana ny orinasan-dry zareo rahavavy rahateo izy ireo ary nanomboka nandrafitra ny rafi-masoandro / fampangatsiahana izay mampiasa 100% ny herin'ny masoandro amin'ny fikirakirana ny rafitra isan-karazany. , ary ezaho hamorona andian-vokatra fitahirizan-karena sy fitehirizana tontolo iainana mahavonjy angovo. Nametraka haavo vaovao amin'ny teknolojia ho an'ny safidy angovo azo havaozina izany.
Manana rafitra fanaraha-maso efitrano mangatsiaka ihany koa izahay, izay afaka manara-maso ny tena ora misy ao amin'ny efitrano mangatsiaka amin'ny telefaona finday, ao anatin'izany ny mari-pana, ny habetsaky ny entana, na nakatona ny varavarana sns., Ary miaraka amin'ny fanairana. mamantatra ny olana ao amin'ny fitehirizana mangatsiaka faran'izay haingana mba hampihenana ny fatiantoka.
Mandritra ny fotoana famokarana sy fivarotana, ny orinasa dia mijery ny fanavaozana ara-teknolojia, manome ny mpampiasa ny vahaolana ankapobeny amin'ny rafitra fampangatsiahana masoandro, ary manome ny mpanjifa rafitra fitantanana mangatsiaka azo antoka sy azo antoka ary azo antoka. Ny fahamendrehana, ny tombotsoan'ny tsirairay ary ny fanavaozana mitohy no soatoavin'ny orinasanay.
Ny orinasanay dia orinasa kely sy salantsalany manampahaizana manokana amin'ny famokarana takelaka photovoltaic amin'ny masoandro.
Amin'izao fotoana izao, manome vahaolana amin'ny vata fampangatsiahana izahay ho an'ny efitrano mangatsiaka kely sy salantsalany. Manana rafi-masoandro sy tambajotra ivelan'ny kintana isika hisafidianana, ary manome vahaolana amin'ny herin'ny masoandro isan-karazany arakaraka ny faritra sy firenena samihafa. Ny rafitry ny fampangatsiahana masoandro dia tena mety amin'ny faritra tsy misy herinaratra na herinaratra lafo vidy. Ny vata fampangatsiahana inverter DC feno dia afaka mamonjy angovo 30% -50% noho ny vata fampangatsiahana matetika mahazatra. Tsy ampy 3 taona, ny faktiora voatahiry dia afaka mividy milina iray hafa.
Na dia vao tsy ela akory aza ny orinasa dia naorina, dia eken'ny ankamaroan'ny mpampiasa ao amin'ity orinasa ity izy. Ny orinasa dia manaraka ny fitsipiky ny fandraisana ny trosa ho fototra, ny maha olona tso-po ary mahavita zavatra am-pitondrantena. Izy io dia mifehy ny tombon-tsoa azo avy amin'ny vata fampangatsiahana any Shina Atsinanana ary manome serivisy avo lenta sy fiantohana vidiny ho an'ireo orinasa an-trano sy avy any ivelany ao amin'ny faritry ny Yangtze River Delta.
Mandritra izany fotoana izany, ny orinasanay miaraka amina vokatra avo lenta sy serivisy mieritreritra, dia nahazo ny fiderana an'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasanay dia manaraka ny fitsipiky ny fahitsiana, ny lazany aloha sy ny kalitao voalohany, ary manompo ireo mpanjifa vaovao sy taloha amin'ny fony manontolo.
Manantena izahay ny hifampandroso, hiara-mandroso ary hamorona ho avy tsaratsara kokoa amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa matotra sy sariaka.